INkundla yokuBika kunye neNkundla yoLwazi lokuBhala
Fumana amaxesha omdlalo weDrama uze uyike iJargon
Ngoko uye waya enkundleni , uthathe amanqaku amnandi kwilingo, wenza zonke iintlanganiso ezidliwano-ndlebe kwaye unemvelaphi eninzi. Ulungele ukubhala.
Kodwa ukubhala malunga neenkundla kunokuba ngumngeni. Iimvavanyo zihlala zide kwaye ziphantse zincinci, kwaye ukuqala kwintatheli yenkundla, i-curve yokufunda inokuthi ihambe.
Ngoko ke ezinye izicwangciso zokubhala malunga neenkundla:
Amagqwetha athande ukutshintshana isigama somthetho -somthetho, ngokufutshane.
Kodwa, amathuba, abafundi bakho abayi kuqonda ukuba yintoni enye ithetha ngayo. Ngoko xa ubhala ibali lakho, ngumsebenzi wakho ukuguqulela intetho esemthethweni kwiNgqungquthela, isiNgesi esilula ukuba nabani na onokuyiqonda.
Uninzi lwezilingo zixesha elide lobunzima bezinto ezisetyenziswayo ezigqithiswe ngamaxesha amfutshane kwidrama enkulu. Imizekelo ingabandakanya ukugqithiswa ngummangalelwa okanye impikiswano phakathi kommeli kunye nejaji. Qinisekisa ukugqamisa ixesha elinjalo kwibali lakho. Kwaye ukuba zibaluleke ngokwaneleyo, zibeke kwi-your ladde.
Indoda enetyala ngokusola ukubulala umfazi wakhe ngexesha lokuphikisana ngokungalindelekanga yema enkundleni izolo kwaye yamemeza yathi, "Ndenze!"
Kubalulekile nakwiyiphi inqaku leendaba ukufumana zombini - okanye onke macala ebali, kodwa njengoko unokucinga ukuba kubaluleke kakhulu kwibali yenkundla. Xa ummangali enetyala elibi kakhulu, ngumsebenzi wakho ukufumana izibambiso zokushushisa kunye neengxoxo zentshutshiso kwinqaku lakho.
Khumbula, ummangalelwa unecala aze aqinisekiswe enetyala.
Fumana iLed Daily Lede
Uninzi lwezilingo ziyaqhubeka iintsuku okanye iiveki, ngoko qi ni sekise ukuba ulandele iziphakamiso zamabali okulandelelana xa ugubungela ixesha elide. Khumbula, isitshixo kukuba uthathe ubungqina obubalulekileyo, obumnandi, kunye nobungqina bemihla ngemihla kunye nokwakha umvuzo wakho malunga naloo nto.
Nangona ibali eliphezulu lebali lakho lifanele libe yinkqubela yokugqibela yolu vavanyo, umgca kufuneka udibanise imvelaphi engundoqo yecala - ngubani umtyholwayo, yintoni etyholwa kuyo, kuphi na nini na ulwaphulaphulo-mthetho, njl nangona xa ityala elipapashwe kakhulu, ungalokothi ucinge ukuba abafundi bakho bayazi yonke imvelaphi yecala.
Sebenzisa ii-Quotes Best
Iingcaphuno ezilungileyo zingenza okanye ziphule ibali lelingo. Jonga phantsi amanqaku amaninzi ngokubhekiselele kwi-notebook yakho, bese usebenzisa izinto ezilungileyo kwibali lakho.
Ukuphilisa iMimangaliso ye-Soursop (iGuanabana) Iziqhamo
Iziseko zoBugcisa - Funda ukuba yiyiphi na kwaye ngubani
I-Taurus ne-Scorpio Uthando olufanelekileyo
I-Top 10 yeJoe Biden kunye neeGaffes